The Witcher (2019) – Gold Channel Movies
Netflixကနေ ထွက်ရှိလာတဲ့ Game မှာလည်းနာမည်ကြီးတဲ့ The Witcherကိုတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းမှာတော့ စာအုပ်နဲ့ ဂိမ်းနဲ့ တူလားမတူလားကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ ။ အရင်းအမြစ်လောက်တော့တူမယ်လို့ထင်ပြီး မင်းသားရဲ့ ကိုယ်ခန္တာတည်ဆောက်ပုံကတော့ သိပ်ပြီးမကွဲပြားပါဘူး။
ဇာတ်လမ်းက စာအုပ်ကို Adaptationလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ အရမ်းကိုကောင်းမွန်တဲ့ setting ,fighting နဲ့ အခန်းကောင်းကောင်းများကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။
The Witcher က Season2ထိ ရည်မှန်းထားပြီးဖြစ်ပြီး Top ဖြစ်နေတဲ့ Disney Plus ရဲ့ The Mandalorian နဲ့ ယှဉ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ မင်းသားအနေနဲ့ပါဝင်ထားတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Superman ကြီး Henry Cavill ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဝစ်ချာ လို့ခေါ်တဲ့ သန္ဓေပွားတစ်ကောင်မှာ ခံစားချက်မရှိပဲ မကောင်းဆိုးရွားတွေ အကောင်ကြီးတွေနတ်ဆိုးတွေကို နိမ်နင်းတဲ့နေရာမှာ အသုံးတော်ဆင့်ခံရတာပါ။ ဝစ်ချာ တစ်ကောင်အနေနဲ့ကတော့ မကောင်းဆိုးရွားက မကောင်းဆိုးရွားပါပဲ ။ နည်းနည်းကောင်းတယ် များတယ် အလယ်အလတ်ဆိုတာမရှိတဲ့အတွက် သူ့မှာရွေးချယ်စရာမလိုပါဘူး ။ ဝစ်ချာရဲ့တာဝန် တစ်ခု ကံတရား တစ်ခုက မကောင်းဆိုရွားကိုသတ်ဖို့ပါပဲ ။ ထို့နောက်သူ့ရဲ့ကံတရားတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ တိုးလာပါပြီ ။
ဆင်ထရာပြည်နယ်ဟာ နက်ဂါ့ဆိုတဲ့ လူမျိုးစု တစ်ခုလက်အောက်မှာစစ်ရူံးသွားပါတယ် ။ နက်ဂါ့ဘက်ကစစ်တိုက်ရတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ ဆင်ထရာ ရဲကမင်းသမီးလေးကိုလိုချင်လို့ပါ ။ ထိုသို့စစ်ရူံးပြီးနောက် မင်းသမီးလေးကို ကာကွယ်ဖို့တာဝန်ဟာ ဝစ်ချာ ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါ…….
TMDB – 9.4
thu reinDecember 26, 2019Reply
အပိုင်း-၅ မှ ၈ ထိ စဆုံးတင်ပေးပါဦး admin
Soe Min SweDecember 27, 2019Reply
ကျန်တဲ့အပိုင်း တေထပ်တင်ပပါဦး ခင်ဗျ Thanks
Kyaw So ThuDecember 28, 2019Reply
PaingpaingDecember 29, 2019Reply
Htut HtutJanuary 7, 2020Reply
S2 ma lr ty voo lr?
Min Thit HtunJanuary 22, 2020Reply
Episode 8 is end of Season 1 ?
YanFebruary 7, 2020Reply
Link တွေ မရတော့ဘူး download
LeaveaReply to Htut Htut Cancel reply
Doom Patrol (TV Shows) (2019) ျမန္မာစာတန္းထုိး